चिनियाँको नेपाली भाषा - China Radio International
(GMT+08:00) 2017-09-05 10:14:29
चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सीआरआईसँग मेरो सम्बन्ध तत्कालीन रेडियो बेइजिङ हुँदै देखि हो। वि स २०४२ सालतिर म इलामको नयाँबजारस्थित अमरकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्दा मैले रेडियो बेइजिङमा एउटा श्रोताका रुपमा पत्राचार गर्न सुरु गरेको थिएँ। त्यसपछि पत्राचार निरन्तर रह्यो। एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षाका लागि म २०४७ सालमा काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँबाट पनि पत्राचार गर्ने काम नियमित नै रह्यो। त्यतिबेला रेडियो बेइजिङका सक्रिय श्रोताहरुले स्थानीय स्तरमा श्रोता क्लब गठन गर्ने प्रचलन थियो। नेपालमा श्रोता क्लबको सुरुवात नै तत्कालीन रेडियो बेइजिङबाट भएको हो।
राष्ट्रिय परिषदको संस्थापक सदस्य हुँदै पछि सचिव र महासचिव भएँ। वि स २०६१ असोज २ गते सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएँ। श्रोता क्लबहरुको राष्ट्रिय छाता संगठनको अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि नै मैले वि स २०६१ जेठमा सीआरआईबाट विशेष पुरस्कार जितेर चीनको भ्रमण गरिसकेको थिएँ।
राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष भएको दुई वर्षपछि २०६३ साल असोजमा म सीआरआई नेपाली सेवाको नेपालको प्रमुख संवाददातामा नियुक्त भएँ। नेपालबाट निरन्तर ७ वर्ष प्रमुख संवाददाताको रुपमा काम गरेपछि २०७० साल भदौमा म सीआरआईको मुख्यालय बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञको रुपमा काम गर्न आएँ। माध्यमिक स्कुलको कक्षा ६ मा पढ्दा तत्कालीन रेडियो बेइजिङ सुन्दै पत्राचार गर्ने एउटा स्कुल ठिटो त्यही रेडियोमा २८ वर्षपछि प्रतिष्ठित विशेषज्ञ पदमा काम गर्नु आफैँमा निकै रोमान्चक इतिहास थियो। यो त्यस्तो ठाउँ थियो जहाँ सत्यमोहन जोशी, गोबिन्द भट्ट, प्रा. डा. बल्लबमणि दाहालजस्ता नेपालका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरुले काम गर्नु भएको थियो।
सीआरआई नेपाली सेवामा म आउँदा अन्य दुईजना नेपाली साथीहरु अजय श्रेष्ठ र लक्ष्मी लम्साल कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो मुख्य काम चिनियाँ सहकर्मीहरुले चिनियाँ भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको समाचार र अन्य सामग्रीको सम्पादन गर्नु हो। त्यसबाहेक समाचार वाचनसँगै आफ्ना नियमित कार्यक्रमहरु रेडियोमा संचालन गर्नु र अंग्रेजी भाषाबाट अनुवाद गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ।
मेरो बाल्यकाल नेपालको पूर्वमा पर्ने इलाम जिल्लाको पनि पूर्वी क्षेत्र नयाँबजारमा बित्यो। म राई लिम्बू तामाङ जस्ता जनजातिको माहोलमा हुर्किएको हुँ। कतिपय नेपाली जनजातिले शुद्धसँग नेपाली बोल्न र लेख्न जान्दैनन्। स्वाभाविक रुपमा उनीहरुको जिब्रोमा मातृभाषा र घरमा बोलिने भाषाको प्रभाव आइहाल्छ। विद्यालयमा केही समय पढेको भरमा नेपाली शुद्ध बोल्न र लेख्न जान्नु उनीहरुका लागि निकै ठूलो सजाय हुन्छ। जनजातिकै किन कुरा गर्नु र हामी तागाधारीहरु पनि कहाँ सुद्धसँग नेपाली बोल्न र लेख्न जान्दछौँ र? त्यसो हुँदोहो त मुख्य नेपाली विषय लिएर पढेका क्षेत्रीबाहुनहरु विश्वविद्यालयमा असफल नहुनु पर्ने हो। म आफैँ शुद्धसँग नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न सिक्दैछु। म अहिले पनि दैनिक रुपमा नेपाली शब्दकोष प्रयोग गरिरहेकै छु। नेपाली भाषा आफैँमा जटिल छ त्यसमाथि अन्य मातृभाषाबाट आएका व्यक्तिलाई यसको कठिनाइको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। व्याकरणका सूत्रदेखि अनेकार्थक शब्द, श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द, लगायत क्रियाविशेषणले नेपाली भाषालाई धनी त बनाएको छ तर उत्तिकै कठिन पनि बनाएको छ।
नेपाली माटोमै जन्मेर हुर्केकालाई त नेपाली भाषा गार्‍हो छ भने चिनियाँलाई कस्तो होला। सीआरआई नेपाली सेवामा १३ जना चिनियाँहरु कार्यरत छन्। उनीहरु चीनका विभिन्न प्रान्तबाट उच्च माध्यमिक स्कुल उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षामा नेपाली विषय पढ्न थालेका हुन्। जसले आफ्नो उमेरको कम्तिमा १८ वर्षसम्म कतै सुन्दै नसुनेका शब्द सुन्नुपर्ने र देख्दै नदेखेको अक्षर पढ्नुपर्ने अवस्थाको चुनौति कस्तो थियो भनेर सोच्दा पनि आश्चर्य लाग्छ। त्यसमाथि नेपालीमा उच्चारण हुने कतिपय ध्वनिहरु चिनियाँ भाषामा छँदैछैनन्। एकैचोटि स्नातक तहमा पुगेर क, ख, ग पढेर पनि चिनियाँहरुको क्षमता देखेर हामी नेपाली दङ्ग पर्छौँ। बेइजिङस्थित संचार विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेपछि उनीहरु सीआरआई नेपाली सेवामा काम गर्न थालेका हुन्। केही चिनियाँ सहकर्मीहरुले काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गएर केही महिना विशेष कक्षा पनि लिएका छन्। बाँकीले विश्वविद्यालयको स्नातक तह पूरा गरेर काम गर्दै सिक्दै गर्दा नेपाली भाषा निकै खारिएको छ।
हामी नेपाली र सीआरआई नेपाली सेवामा कार्यरत चिनियाँहरुमा भएको मूलभूत भिन्नता के हो भने हामी बोल्दा धेरै अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्छौँ तर उनीहरु जानेको जति शुद्ध नेपालीमा बोल्छन्। नेपाली भाषाकै शब्द प्रयोग गर्दा पनि त्यसको अर्थ विचार गरेर कुरा गर्छन्। एकपटक हामीले कुनै प्रसङ्गमा 'त्यो त खतरा छ' भन्यौँ। हिजोआज नेपालीहरु 'खतरा' शब्दलाई उत्कृष्ट अर्थ दिने गरी प्रयोग गर्छन्। उदाहरणका लागि त्यो गायक त खतरा छ। मेसी जस्तो खतरा खेलाडी त अर्को छैन। यस्तै सन्दर्भमा हामीले खतराको प्रयोग गरेका थियौँ। हामीले सकारात्मक रुपमा प्रयोग गरेको खतरालाई एकजना चिनियाँ सहकर्मीले नकारात्मक रुपमा बुझेछन्। वास्तवमा खतराको अर्थ चाहिँ नकारात्मक नै हो। विद्युतको पोलमा खतराको चिन्ह राखिएको हुन्छ। त्यसकारण अर्कालाई गम्भीर हानि पुर्‍याउने कुरालाई खतरा भनिन्छ। अहिले त्यो अपभ्रंश भएर सकारात्मक र उत्कृष्ट हुन थाल्यो। त्यस्तो अर्थ चिनियाँलाई थाहा हुने भएन। ती चिनियाँ सहकर्मीले 'किन खतरा भनेको ? के नराम्रो छ र ? भन्न थालिन्। यसको अर्थ बुझाउन हामीलाई निकैबेर लाग्यो।
मैले अफिसमा चलाउने कम्प्युटरमा केही समस्या आएपछि मैले सहकर्मी मेघालाई गुहारेँ। मैले चलाउने कम्प्युटर चलाउँदै उहाँले मलाई सोध्नुभयो 'मेरो कम्प्युटर कहाँ छ ?' उहाँको कम्प्युटर उहाँकै टेबुलमा थियो। मैले देखाइदिएँ। उहाँले फेरि सोध्नुभयो 'हैन तपाईंको कम्प्युटरभित्र मेरो कम्प्युटर कहाँ छ?' 'मैले चलाउने कम्प्युटरभित्र किन तपाईंको कम्प्युटर खोज्नु पर्यो नि?' मैले सोचेँ नेटवर्किङमा राखिएकाले मेरो कम्प्युटरभित्र गएर उहाँले आफ्नो कम्प्युटर खोल्न खोज्नु भएको होला। तर त्यसो होइन रहेछ। कुरा बुझेपछि मलाई निकै हाँस उठ्यो। उहाँले त कम्प्युटरको डेक्सटपमा रहेको 'माइ कम्प्युटर' भन्ने आइकन खोज्नु भएको रहेछ। त्यो आइकन मैले चलाउने कम्प्युटरको फ्रन्ट डेक्समा रहेनछ। 'माइ कम्प्युटर' भनेर उहाँले सोध्नु भएको भए म तुरुन्तै कुरो बुझ्थेँ। तर उहाँले 'मेरो कम्प्युटर' भन्दा म अलमलमा परेको थिएँ।
वि स २०७० मंसिर २० गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कूलपति बैरागी काइँलाको नेतृत्वमा एक साहित्यिक प्रनिधिमण्डलले सीआरआई नेपाली सेवाको भ्रमण गरेको थियो। नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका प्राज्ञहरु नेपाली भाषाका मुख्य ठेकेदारकै हैसियतमा रहने कुरा उल्लेख गरिरहनु पर्दैन। उहाँहरुसँग नेपाली भाषाको संरचना र समस्याका बारेमा सीआरआई नेपाली सेवामा कार्यरत चिनियाँहरुले पनि मजैले वहस गरे।
छलफलकै क्रममा बैरागी काइँलाले पिसाव गर्नका लागि ट्वाइलेट कता छ भनेर सोध्नुभयो। हामी नेपालीहरुले सजिलै बुझ्ने र प्रयोग गर्ने शब्द ट्वाइलेट नै हो। उहाँको प्रश्नलाई चिनियाँले बुझेनन् र के भन्नु भएको भनेर दोहोर्‍याएर सोधे। उहाँले पिसाब गर्ने ठाउँ कता हो भनेर सोध्नुभएपछि नेपाली विभागकी प्रमुख वर्षाजीले 'ए सौचालय सोध्नु भएको' भनेर मुख छोपेर हाँस्नुभयो। कति लाजमर्नु हामी नेपालीले बिर्सिसकेको शब्द चिनियाँले सिकाउनु पर्ने ? हिजोआज हामी सौचालय चिन्दैनौँ तर ट्वाइलेट सजिलै थाहा पाउँछौँ। वर्षाजीले बैरागी काइँलालाई प्रश्न गर्नुभयो 'नेपाली भाषामा सौचालय हुँदा हुँदै किन अंग्रेजी भाषाको शब्द प्रयोग गर्नु भएको ?' त्यसपछि फेरि नेपाली भाषामा आयातित अंग्रेजी शब्दका बारेमा थप वहस भयो।
२०७३ असार ८ गते सीआरआई नेपाली सेवामा कार्यरत साथीहरुले एउटा भिडियो सुटिङ गर्ने योजना बनाएका थिए। रेशम फिलिली चलचित्रको पिरतीको छाता ओडाउन गीतमा सहकर्मी लक्ष्मी लम्साल र चिनियाँ साथी मेघाले गीत गाउनु भयो भने हामी सबै नाच्नुपर्ने थियो। सहकर्मी मुनाले हामीलाई भिडियो सुटिङ्गका लागि 'घाँसे मैदान'मा जान आग्रह गर्नुभयो। विभिन्न समाचारमा तिब्बतका पशुपालकले पशुचरणमा प्रयोग गर्ने जमिन र भित्री मङ्गोलियामा घोडा चराउने स्थानलाई 'घाँसे मैदान' उपमा दिएर समाचार सम्पादन गर्ने बानी परेको थियो। बेइजिङमा त कहीँ पनि घाँसे मैदान थिएन। अब कति टाढा जानु पर्ने हो भिडियो सुटिङ्का लागि भनेर मैले मुनालाई सोधेँ। उहाँले नजिकै हो भन्नुभयो। मलाई घाँसे मैदान हेर्ने उत्सुकता थपियो। पछि सीआरआईको कमाउण्ड भित्रकै दुवो भएको चउरलाई पो उहाँले घाँसे मैदान भन्नु भएको रहेछ।
समाचार सम्पादनका क्रममा एकपटक यस्तो प्रशङ्य आयो - 'चिनियाँ राष्ट्रपतिले सी चिन फिङले आतङ्कवादका सामु इन्द्रधनुस नहुने बिचार व्यक्त गर्नुभयो।' कुनै देशमा आतङ्कवादी संगठनले आक्रमण गरी मान्छे मारेपछि सो देशका प्रमुखलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिले समवेदना सन्देश पठाएको समाचारको भावानुवाद थियो त्यो। वास्तवमा शाब्दिक अनुवादले त्यस्तो गराएको थियो। आतङ्कवादका सामु नझुक्ने भन्न खोजेको कुरालाई शब्दको अनुवाद गर्दा त्यस्तो भएको थियो। चिनियाँ भाषाको संरचना नै ठाडो अनुवाद हुन्छ। फेसबुकलाई चिनियाँ भाषामा लियान सु भनिन्छ। 'लियान' भनेको अनुहार हो भने 'सु' भनेको किताब हो। त्यसैगरी टेलिफोनको हट लाइन भन्नु पर्‍यो भने 'र सियान' भनिन्छ। 'र' भनेको तातो हो भने 'सियान' भनेको लाइन हो। यस्तो संरचना भएको भाषाको व्यक्तिले 'नझुक्ने' शब्दको ठाउँमा 'इन्द्रधनुष' राख्नु मनासिव नै त हो नि। हामीले पनि अंग्रेजीबाट अनुवाद गर्ने हो भने 'बो' शब्दको अर्थ त 'धनुस' नै त हो नि। प्रसङ्गले पो झुक्नु भन्ने अर्थ दिएको हो त।
अर्को प्रसङ्गमा भ्रष्टाचार विरुद्धको चिनियाँ अभियानसँग सम्बन्धित समाचार थियो। चीनमा भ्रष्टाचार गरेर अमेरिका भागेका केही व्यक्तिलाई चीनले फिर्ता ल्याएको थियो। सो समाचार अनुवाद गर्दा एकजना चिनियाँ बहिनीले 'ती भष्टचारी चिनियाँ चाहन्थे सूचि'मा थिए भनेर लेखिछन्। समाचार सम्पादन गर्ने क्रममा म छक्क परेँ। के हो यो 'चाहन्थे सूचि' भनेको? पछि बुझ्दा प्रहरीको खोजीको सूचिमा रहेको भन्ने रहेछ। अंग्रेजी 'वान्टेड' शब्दको ठाडो अनुवाद त 'चाहन्थे' नै त हो नि आखिर। हैट म कुरो बुझेपछि निकैबेर पेट मिचिमिची हासेँ।
चिनियाँ सहकर्मीहरुले हामीले तयार बनाएको अथवा विभिन्न नेपाली एजेन्सीबाट लिएका नेपाली समाचारलाई चिनियाँमा अनुवाद गर्नुहुन्छ। त्यही क्रममा चिनियाँ साथी राजुले मलाई एउटा समाचारमा प्रयोग भएको विषय बस्तु सोध्नुभयो। फिचर समाचारमा 'खुट्टा कमाउनु' भन्ने पदावली प्रयोग भएको रहेछ। यसको अर्थ काम गर्न नसक्नु अथवा आँट र साहस नहुनु हो भन्ने कुरा नेपालीले सजिलै बुझ्ने कुरा हो। उहाँले त यसलाई 'धेरै राम्रो' भनेर अनुवाद गर्नुभएछ। खै किन हो उहाँले मलाई सोध्नुभयो 'खुट्टा कमाउनु भनेको साहसी र राम्रो काम हैन त?' उहाँले किन यसरी ठीक उल्टो अर्थ आउने गरी सोध्नु भयो भनेर मैले बुझ्न चाहेँ। उहाँले शब्द शब्दको अर्थ खोज्नु भएछ। उहाँले खुट्टा त सजिलै बुझ्नुभयो। अनि पैसा कमाउनु भनेजस्तै खुट्टा कमाउनु भनेको धेरै खुट्टा भेला गर्नु भन्ने बुझ्नु भएछ। धेरै खुट्टा भएपछि टेक्न पनि सजिलो भयो अनि भएन त साहस।
चिनियाँहरुले सबै नामलाई पनि अनुवाद गरिदिँदा कहिलेकाहीँ समस्या उत्पन्न भएको छ। चीनको छिङ्गहाइ प्रान्तको यु शु तिब्बती जातीय स्वायत्त प्रिफेक्चर सरकारको सहयोगमा भूकम्पले ध्वस्त बनाएको काठमाडौँ चुच्चेपाटीको एक विद्यालयको पुन निर्माण सुरु भएको समाचार थियो। सामचारमा विद्यालयको नाम 'जनता अशल उन्नति मध्यम विद्यालय' भनेर लेखिएको थियो। नेपालमा यस्तो विद्यालयको नाम त नहुनु पर्ने हो। मैले समाचार अनुवाद गर्ने चिनियाँ सहकर्मीलाई सोधेँ। विद्यालयको नाम अंग्रेजीमा लेखिएको रहेनछ। उनले चिनियाँमा लेखिएको विद्यालयको नेपालीमा अनुवाद गरेकी रहिछन्। गुगलबाट अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर मलाई पनि देखाइन्। गुगलले अनुवाद गर्दा 'पिपुल गुड वेलफेयर मिडल स्कुल' भनेर देखायो।
यो विद्यालय वि‌ सं २००४ मा स्थापना भएको रहेछ। दुई वर्ष अगाडि गएको विनाशकारी भूकम्पबाट उक्त विद्यालय ध्वस्त भएको थियो। हाल यो विद्यालयमा १२०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सन् २०१६ को डिसेम्बरमा यो विद्यालयले चीनसँग सहायोग निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको रहेछ। यी जानकारी पाइए पनि विद्यालयको नाम त पक्कै पनि त्यो होइन भन्ने मलाई निश्चित भयो। समाचारसँग फोटो पनि थियो। फोटोमा डा हरिश्चन्द्र शाहलाई देखेपछि मैले फोन गरेर सोधेँ। उहाँले विद्यालयको नाम 'जनकल्याण मावि' रहेको बताएपछि मैले फेरि समाचार दोहोर्‍याएर हेरेँ। सिन्ह्वा समाचार समितिले समाचार सम्रेषण गर्दा 'जनकल्याण' शब्दलाई व्यक्तिवाचक नाममा राख्नु पर्नेमा हरेक शब्दको चिनियाँमा अनुवाद गरेको रहेछ। अब चिनियाँबाट नेपालीमा अनुवाद गर्दा 'जनकल्याण'को ठाउँमा 'जनता अशल उन्नति' हुन गयो।
सीआरआई नेपाली सेवामा हामी विदेशी विशेषज्ञलाई हरेक वर्ष करारमा राखिएको हुन्छ। एक वर्षपुगेपछि फेरि करार नवीकरण गर्नुपर्छ। एकजना चिनियाँ सहकर्मीले साथी लक्ष्मी लम्साललाई तपाईंको ठेक्कापत्र लिएर आउनुहोस् है भन्नु भएछ। हैन के हो ठेक्कापत्र भनेको? उहाँ अलमलिनुभयो। उहाँले दोहोर्‍याएर सोध्नुभयो। चिनियाँ सहकर्मीले फेरि भन्नुभयो तपाईंलाई सिआरआईले दिएको ठेक्कापत्र भनेको क्या। तपाईंले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। उहाँको कुरा सुनेर म पनि वाल्ल परेँ। पछि कुरा बुझ्दा सीआरआई र विदेशी विशेषज्ञबीच भएको सम्झौतापत्र भनिएको रहेछ। उहाँले त्यसलाई ठेक्कापत्र भन्नुभयो। त्यसलाई नेपालीमा करारनामा पनि भनिन्छ। हामी अंग्रेजीमा अभ्यस्त भएकाहरु चाहिँ कन्ट्र्याक लेटर भन्छौँ। यसलाई ठेक्कापत्र पनि भनिन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। लक्ष्मीजीको करार नवीकरणका लागि ठेक्कापत्र मागिएको रहेछ।
तिब्बतको एउटा श्रव्यदृश्य डकुमेन्टको अनुवाद कार्य भइरहेको थियो। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारणका लागि स्क्रिनमा सब टाइटल नेपाली भाषामा राख्नलाई उनीहरुले बोलेको कुरालाई चिनियाँ साथीहरुले नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु भएको थियो। हामी ती अनुदित सामग्रीको सम्पादन गर्दै थियौँ। एकजना साथीले लेख्नुभएछ 'तिब्बतका पशुपालकले भेडालाई हरेक दिन विर्यपात गराउँछन्। यसरी विर्यपात गराउनु नै उनीहरुको प्रमुख आम्दानीको श्रोत हो।' हन विर्यपातबाट कसरी आम्दानी हुन्छ? मलाई ठूलो जिज्ञासा पैदा भयो। अनुवाद गर्ने व्यक्तिलाई के भन्न खोज्नु भएको हो भनेर सोद्धा बल्ल थाहा भयो भेडा दुहुने कार्य लेख्न खोज्नु भएको रहेछ उहाँले। सायद दुहुनु र विर्यपातको चिनियाँ शब्द उही हुने भएर हो अथवा किन हो उहाँले त्यो शब्द प्रयोग गर्नु भएको थियो।
चिनियाँ सहकर्मीहरुसँग काम गरेको अहिले चार वर्ष भयो। यी चार वर्षमा हरेक दिन नयाँपन र रमाइलो महशुस हुन्छ। आफैँले बिर्सिसकेका कतिपय नेपाली शब्द चिनियाँबाट सुन्दा अचम्म पनि लाग्छ।
साभारः संहिता त्रैमासिक। नेपाल प्रेस काउन्सिल 2074 असार।